पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका चन्द्रमा दाहिना, भारतले किन अझै ‘महाराज’ मान्छ ? - Sindhuli Saugat
पत्रपत्रिका बाट २०७५ कात्तिक २० गते मंगलवार काठमाडौं
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यवस्था परिवर्तनको कुनै पनि मौकाको खोजीमा छन् । त्यसैले बेलामौका उनले राजनीतिक विषयमा पनि बोल्ने गरेका छन् । तर यतिबेला उनका चन्द्रमा दाहिना भएको जस्तो देखिएको छ । भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आगामी २६ जनवरीमा उनलाई सम्भावित प्रमुख अतिथिका रूपमा राखिएको छ । त्यसको खुुलासा भारतीय मिडियाले गरेपछि पूर्वराजाले कुटनीतिक चलखेल पनि व्यापक बढाएको बताइन्छ ।
भारतबाट नै पूर्वराजालाई प्रमुख अतिथि बनाउने विषयमा भएको सूचना प्रवाहबारे भने निर्मलनिवास सचिवलायले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । उक्त सन्देशलाई सकारात्मक लिएको सचिवालयका एक जना सञ्चारसहयोगी डा. फणि पाठकले भने तिहारपछि यस विषयमा बुझ्ने दैनिक नेपाललाई बताए । ‘मैले पनि सुनेको छु । पढेको छु । तर यस विषयमा तिहारपछि मात्र केही बुझ्ने कोशीश हुनेछ’, उनले भने,‘अफिसियल निम्तो आएको छ की छैन त्यसबारे पनि बुझ्न बाँकी छ ।’दैनिकनेपाल बाट ।
पछिल्लाे - ऐतिहासिक सिन्धुलीगढीमा विजयोत्सव मनाइँदै
अघिल्लाे - काँगेस महासमिति बैठक मङ्सिर २८ देखि पुस ३ सम्म